Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Ebe 10 freelancer kacha elu n'ụwa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Education • Entertainment • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ebe 10 freelancer kacha elu n'ụwa.
Dị ka ihe ọhụrụ dijitalụ na-agbanwe ụzọ anyị si arụ ọrụ, oge ọrụ ụlọ ọrụ na-aghọ ihe gara aga.
Dị ka dijitalụ ọhụrụ na-agbanwe ụzọ anyị si arụ ọrụ, na oge ọrụ ụlọ ọrụ na-emekarị na-aghọ ihe gara aga, ndị ọkachamara ego achọpụtala mba kachasị mma n'ụwa ka ọ bụrụ onye nweere onwe ya.
Iji duzie ọmụmụ ihe ahụ, e nyere mba dị iche iche akara n'ime 10 maka ihe ọ bụla, gụnyere ọsọ brọdband, ọnụ ahịa obibi, ike nke ikike ndị ọrụ, ndepụta obi ụtọ na ohere nke oghere ọrụ.
Obodo 10 kacha mma ịbụ onye nweere onwe ya:
n'usoro Aha Mba Ọsọ mgbasa ozi Julaị 2021 (Mbps) Ọnụ mgbasa ozi kwa ọnwa 2020 (USD) Ọchụchọ maka ọrụ onye akwụghị ụgwọ kwa 100,000 Ikike iwu 2019 Ndekọ ọdịiche okike zuru ụwa ọnụ 2020 Ọnụ ndụ onye ọ bụla, kwa ọnwa (USD) Oghere na-arụkọ ọrụ kwa 100,000 Ndekọ obi ụtọ 2017-2019 Akara Freelancer
Singapore na-ewere ọnọdụ dị elu dị ka ebe kachasị mma iji rụọ ọrụ dị ka onye nweere onwe ya na 2021, yana akara 7.35. Singapore na-erite uru na brọdband nke dị ọnụ ($ 33.43 kwa ọnwa) yana nnukwu ọsọ (256.03 Mbps). Obodo a na-arụ ọrụ nke ọma n'ofe bọọdụ, n'agbanyeghị na ọ bụghị ebe kacha ọnụ ala ibi na a ka nwere ohere maka imeziwanye n'ihe gbasara akara Index Index nke obi ụtọ ya.